नयाँ वर्षको उपहार | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो नयाँ वर्षको उपहार
इस्वी संवत्को नयाँ वर्ष २०१८ को थुप्रै शुभकामना आदानप्रदान भए । सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलमा नयाँ वर्षका राम्राराम्रा अक्षरले लेखेका शुभकामना, फोटा, गीत र अझ भिडियोसमेतले भरिए । यस्ता थुप्रै शुभकामनाको झटारो तपाईंले पनि सित्तैंमा पाउनु नै भयो होला । तपाईंले पनि कत्तिलाई शुभकामनाले जवाफ फर्काउनु नै भयो होला । तर, नयाँ वर्षमा नयाँ चैं के हुने भए त भनेर नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै दिमाग पनि घुमेको घुम्यै पो छ त ।
के नयाँ वर्षमा कुकुरहरु भुक्न बन्द गर्लान् ? बुढाबुढीहरु खोक्न छोड्लान् ? नेताहरु भाषण ठोक्न छाड्लान् ? के सरकारी कार्यालयमा घूसको सिलसिला बन्द होला ? सरकारी कर्मचारी हाजिर मात्र गरेर जागिर खाने गर्न छाड्लान् ? नयाँ बन्ने सांसद, मन्त्रीले सुतेर खाने, लुटेर खाने काम बन्द गर्लान् नयाँ वर्षदेखि ? के कालाबजारियाले उपभोक्तामाथि दया जागेर महँगीको छुरी चलाउन बन्द गर्लान् ?
के नयाँ वर्षमा महँगी बढ्ने क्रम रोकिएला ? के वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको लाइन छोटो हुँदै जाला ? त्यसो भयो भने रेमिट्यान्स घटेर हुने विदेशी मुद्राको सङ्कटचाहिँ कसरी समाधान होला ? के नयाँ वर्षमा मानिसहरु अनुशासित बन्दै जालान् ? आफ्नो घरको फोहोर घरबाहिर सडकमा फ्याँक्ने बानी सुधार्लान् ? के सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा लेखिने घृणा, इष्र्या, द्वेष, उद्वेग, गालीगलौजको भाषा अलि सभ्य र सुसंस्कृत बन्दै जाला ? के नयाँ वर्षमा अपराधको शृङ्खला कम हुँदै जाला ?
नयाँ वर्षमा भ्रष्टाचारको ग्राफ छोटो बन्दै जाला ? कहालीलाग्दो रुपमा एक मुलुकसँग रहेको परिनिर्भरता नयाँ वर्षबाट घट्दै जाला ? आयात घटेर निर्यात बढ्दै जाला ? नयाँ वर्षबाट पैसाको प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउने क्रियाकलाप कम हुँदै
जाला ? नयाँ वर्षले कृषिमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुद्धि, बुद्धि फर्केला नीति निर्माता र यसका लागूकर्ताहरुमा ?
नयाँ वर्षबाट नेपाली बैङ्कहरुले एसएमएसबाट ब्याज बढेको सूचना दिएर आफ्नो नाफा मात्र सुरक्षित गर्ने बैङ्किङको साटो नेपाली अर्थतन्त्र उकास्ने खालको साँच्चिकैको बैङ्किङ सेवा शुरु गर्लान् ? नयाँ वर्षबाट नेपाली उपभोक्ता मिसावट र अभावको शिकार हुनु नपर्ला त ? नयाँ वर्षबाट पतिपत्नीहरु झगडा गर्न बन्द गर्लान् ?
यी यस्ता थुप्रै प्रश्नको बाढी तपाईंको मनमा पनि पक्कै आएको होला कि नयाँ वर्षले कुन चैं नयाँ फूल फुलाउन शुरु गर्छ भनेर । अरु कुनै नयाँ फूल फुलाएनछ भने पनि एउटा नयाँ काम यो नयाँ वर्षले पक्कै गर्न शुरु गरेको छ । नेपालीहरु अब विश्व नागरिक बन्दै गइरहेका छन् । क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भव्य रुपमा मनाउने क्रममा नेपाली स्वतः नेपाली नागरिकबाट विश्व नागरिक बन्ने सौभाग्य पाउँदै गएका हुन् । यो कम उपलब्धिको कुरा होइन । अब हामीलाई पूर्ण विश्व नागरिक हुनबाट कसैले रोक्न सक्तैन । तर, यहाँनेर बिर्सनै नहुने तथ्य के छ भने नेपालीलाई विश्व नागरिक योग्य बनाउने सुकाम भने अरु कसैले गरेको नभै हाम्रै महान् नेपाली नेताहरुले नै हो । नेताले जनतालाई केही पनि गरेन भनेर आम मानिस गुनासो गरिरहन्छन् । तर, नेपालीलाई विश्व नागरिक बनाउने यो देन त आखिर नेपाली नेताहरुकै हो नि । यो योगदानलाई भुल्न पाइँदैन । नयाँ वर्षमा नेपाली नेताले जनतालाई दिने यो भन्दा ठूलो उपहार अरु के नै हुन सक्ला र ?